လေ့ကျင့်သင်ကြားဆယ်ကျော်သက်မော်ကွန်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထားဆယ်ကျော်သက်
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ Disneyland ပဲရစ်မကြာခဏအများအပြားပရိတ်သတ်တွေသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အဘို့အပထမဦးဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒစ္စနေးပန်းခြံဖြစ်ပါသည်. သငျသညျဆောငျးရာသီနဲ့နွေရာသီကာလအတွင်းပဲရစ်မှာအကောင်းဆုံး Disneyland အားလပ်ရက်စီစဉ်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုခငျြပါနဲ့? ထိုအခါသင်သည်လက်ျာအရပ်မှလာပါတယ်! Marne-la-Vallee မှာတည်ရှိပါတယ်, မြို့ဆင်ခြေဖုံး…